Instagram mpanaraka mpanaraka Instagram ▷ ➡️ mpanaraka ▷ ➡️
Febroary 28, 2019 0 fanehoan-kevitra 8602
Instagram no fampiharana BOM an'ny tambajotra sosialy, izy no nitombo indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy, nahatratra olona an-jatony tapitrisa izay mampiasa azy ao amin'ny tobin'ny mpampiasa azy. Tamin'ny fiandohany dia rindranasa iray hampakatra, hizara sary sy horonan-tsary, nanomboka ny taona 2012 izay novidian'ny FACEBOOK dia nanomboka ny fitomboany haingana.
Nanomboka tamin'ny taona 2103, ny Instagram manomboka ampiasaina amin'ny solosaina ary avy eo manomboka ny fampiharana ny famoahana boky an-tsoratra, fitaovana izay manintona ho an'ny orinasam-panekena izay manaiky ny fitantanana milamina hampiasa izany ho fitaovana amin'ny digital marketing.
Amin'izao fotoana izao, raha tsy eo amin'ny instagram "Tsy misy ianao" ary na dia toa mihabe loatra aza dia toy izany, arakaraka ny maha-mpanaraka ny orinasa no mahomby kokoa. Ahoana ny fisiana sy ahazoana mpanaraka mahomby? Fampiasana generator iray tsotra mba hahazoana mpanaraka bebe kokoa amin'ny instagram. Avy eo dia holazainay aminao ny fomba.
Fampiharana generator mpanaraka Instagram tsara indrindra
Ny hevitra dia ny ahazoana mpanaraka bebe kokoa, na manana kaonty manokana na orinasa ianao, ho tratranay izany amin'ny alàlan'ny mpamorona mpanaraka amin'ny pejy Instagram na kaonty amin'ny Internet.
Inona no safidy tsara indrindra? Ilay iray hitanao fa mahazo aina indrindra, eto izahay hanampy anao hahita ireo safidy azo alaina. Andao hiresaka momba ireo rindranasa (App)
Izy io dia iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny Android, mamela anao amin'ny kinova maimaim-poana izy hampivondrona ny mpanaraka anao amin'ny rejisitra, izay nijanona tsy hanaraka anao, izay manaraka anao, mombamomba anao, tianao ary mpankafy. Amin'ity kinova ity dia afaka mahita mpanaraka ianao, iza no nanakana anao, mpanaraka matoatoa toy ny sary, azonao atao ny mifehy ny kaonty, izay ny zava-dehibe indrindra ahazoana mpanaraka bebe kokoa. Tadiavo ao amin'ny App Store.
Izy io dia fampiharana haingana sy maimaim-poana hitantsika ao amin'ny App Store. Ny mampiavaka azy indrindra dia ny hoe tsotra sy sariaka ary mahafinaritra mihitsy aza satria mifototra amin'ny fampiasana vola virtoaly izay takalonao amin'ny tiany sy manaraka anao, natao ho an'ny iO na Android izy io.
Namboarina ho an'ny Iphone, dia haingam-pandeha haingana dia mpamokatra mpanara-dia ary afaka mahazo fanarahana (track) tsara ho an'ny mpanara-dia, ireo izay nandefa fangatahana, ireo izay tiantsika harahintsika, ireo izay tsy tiantsika intsony, ireo izay manome hevitra ary misy lahatsoratra mahomby. Nahita izany tao amin'ny AppStore izahay.
Pejy ao amin'ny mpanamboatra Instagram an'ny mpanaraka bebe kokoa
Na dia manampy antsika hahazo ny mpanaraka amin'ny pejy amin'ny Internet aza ny App dia hahazo kalitaon'ny mpanaraka isika na mitovy fiheverana avy amin'ny mpanaraka. Ankehitriny izahay dia hahita pejy vitsivitsy izay afaka manampy anao amin'ny iraka hampitomboana ny isan'ny mpanaraka ao amin'ny kaontinao Instagram.
Tsotra sy sariaka tokoa, haingana, manana kinova maimaim-poana azonao atao isan'andro izy ary miaraka aminy hatramin'ny 20 ny tiany ary 10 ny mpanaraka azy isan'andro, ny fatiantoka an'ity pejy ity dia ny famalianao ny fanadihadiana amin'ny angona manokana. Ny kinova aloa dia manomboka amin'ny 40 tiany ho an'ny sary ary hatramin'ny 2.550 toa ny adiresy tranonkala www.mrinsta.com Afaka mandoa miaraka amin'ny Paypal na carte de crédit ianao.
Maimaimpoana ary haingana, saingy tsy mahomby ary tsy maintsy mameno ny fanadihadiana ianao, ankoatry ny fizarana amin'ny Twitter sy Facebbok, raha ny hevitray dia kely dia mampidi-doza izany.
Haingam-pandeha sy sariaka tokoa, mandeha ho azy ny hetsika ao amin'ny Instagram, manome mpanaraka tena izy, manana drafitra fitsapana maimaimpoana mandritra ny 3 andro. Ny kinova aloa dia manana drafitra efatra misy hetsika 30,90,180, 365, XNUMX ary XNUMX andro, autofollws, autoOnfollwers, lisitra misy fizarana, tenifototra misy fizarana. Hitanao izany ao www.speedygram.co/es
Ity pejy ity dia soso-kevitra indrindra satria haingana be, vidiny lafo, fandoavam-bola azo antoka, misy fampahalalana sy serivisy ho an'ny mpampiasa hamahana ny fisalasalana amin'ny alàlan'ny mailaka, serivisy tsy fantatra anarana, izany hoe tsy hitan'izy ireo fa nanao fifanarahana tamin'ity serivisy ity ianao, raha tsy misy lakile . Ho an'ny orinasa voasoratra anarana ihany izany
Amin'ny tontolo erantany, tena zava-dehibe tokoa ny hahafantaran'izy ireo anao ary araka ny efa natoronay anao fa misy, raha manana orinasa ianao na liana te ho fantatra dia manasa anao indrindra izahay hampiasa ireo takelaka karama, satria manolotra mpanaraka anao ambony be dia be izy ireo. Manome tolotra azo antoka ho an'ny maro an'isa izy ireo, noho izany dia manolotra ampahany kely amin'ny teti-bola mba hampitomboana ny isan'ny mpanaraka manome antoka anao hahomby amin'ny paikady ara-barotra, manome toky izahay fa hitombo be ny mpanaraka sy ny hevitrao.
Kaonty na mpanaraka mpamokatra profil
Raha toa ianao ka tsy atokisana ireo fampiharana rehetra ireo fa mbola te hahita mpanaraka bebe kokoa, dia misy fomba iray ahafahanao mahazo izany tsy mandoa na mampiasa fitaovana.
Ao amin'ny Instagram dia misy kaonty ho an'ny daholobe izay ahafahanao manaraka ny mpanara-dia haingana kokoa noho ny fomba mahazatra. Apetraho fotsiny ao amin'ny motera Hashtag ny marika #Follow4Follow.
Ao no ahitanao andian-dahatsoratra Instagram izay omena anao mpanaraka tsy misy fampiasam-bola, ankoatra ireo mpanaraka azy ireo. Izy ireo dia 100% tena izy. Toy izao manaraka izao ny fomba ahazoana ny mpanaraka ny kaonty:
1.- Ao amin'ny motera fikarohana #follow4follow
2.- Ampidiro ny kaonty miteraka fahatokisana bebe kokoa
3.- manomboka manaraka ny kaonty nofidinao
4.- amin'ity kaonty ity dia tsy maintsy manaraka ny mpampiasa rehetra misesy ianao
5.- Aorian'ity fiandrasana ity dia minitra vitsivitsy. Ireo no hanaraka dia hanomboka hanaraka anao ireo
Miadana noho ny fampiharana ahazoana mpanara-dia instagram, saingy azo ekena daholo izany satria ny zava-drehetra dia avy amin'ny fampiharana Instagram mitovy.
Na izany aza, tokony ho fantatrao fa zara raha manao fifandraisana hafa toy ny tiana na ny fanehoan-kevitra ireo olona ireo, raha tsy hoe tena tsara ny atiny dia hanaraka anao ihany izy.
1 Fampiharana generator mpanaraka Instagram tsara indrindra
1.2 TURBO HAFA
2 Pejy ao amin'ny mpanamboatra Instagram an'ny mpanaraka bebe kokoa
2.1 MR. Manaingany.
3 Kaonty na mpanaraka mpamokatra profil
DM Instagram na fandefasana hafatra mivantana dia inona ary ahoana ny fampiasana azy?
23 Marketing Tips ao amin'ny Instagram